My little loom to weave thoughts and emotions....
သုံးနှစ်ဆိုတဲ့ ကာလက တကယ့်ကိုပဲ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ကုန်ဆုံးသွားခဲ့တယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ် နွေရာသီကာလမှာ သားကလေး မွေးလာခဲ့တယ်၊ ထုံးစံအတိုင်း မမွေးခင်ကလည်း ပြင်ရဆင်ရ၊ မွေးလာပြန်တော့လည်း ပြုစုဂရုစိုက် ရနဲ့ပေါ့၊ ဒီကမ္ဘာပေါ်က အခြားအခြားသော မိဘတွေလိုပဲ ကျနော်တို့လည်း သားနဲ့အတူ တဖန်ပြန်ပြီး ကြီးပြင်းခဲ့ရ ပြန်ပါတယ်၊ သူနဲ့အတူတူ ကြီးပြင်းတယ် ဆိုတာက တကယ်ပါ၊ ဥပမာ- သူ ခြောက်လသား အရွယ်မှာ ခြောက်လသား ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ နေထိုင်မှုအဝဝကို ကျနော်တို့လည်း တချိန်တည်း သင်ကြားခဲ့ရတယ်၊ သူ မှောက်ဖို့ ကြိုး စားတဲ့အခါ၊ လေးဖက်သွားဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ၊ ပထမဆုံး ခြေလှမ်းတွေ စ,လှမ်းတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ လွဲချော်မှု၊ အောင်မြင်မှု၊ မတော်တဆ ထိခိုက်မှု စတာတွေကို ကူညီထိန်းမ,ရင်း၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရင်း၊ ရီမော အားပေးရင်းနဲ့ပဲ နေ့ရက်တွေက တတိတိ ရွေ့လျောသွားခဲ့ကြတယ်၊ အဲဒီတုန်းက နေ့စဉ်ဘဝတွေကို အခုပြန် စဉ်းစားတော့ အင်မတန်ရှည်လျားတဲ့ တီဗီစီးရီး တစ်ခုကို ကြည့်ရသလိုပဲ၊ တချို့အခန်းတွေကို မှတ်မိသလိုလို၊ မမှတ်မိသလိုလို နဲ့...၊ ဇတ်လမ်းဘယ်လိုစ,တယ်၊ ဘယ်နားမှာ ဘယ်လိုအလှည့်အပြောင်း ဖြစ်သွားတယ် စ,တာ တွေကို မှတ်မိ သယောင်ယောင် ရှိပေမယ့် ဖြစ်စဉ်တွေကို ရှေ့နောက်စီစဉ်ပါ ဆိုရင်တော့ တော်တော်ဝါးသွား ပြန်တယ်၊ ဒါက ကျနော့်တစ်ဦးတည်း အမြင်လည်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ မိခင်တွေကတော့ ဖခင်တွေနဲ့စာရင် ဒါမျိုးတွေကို ပိုပြီး မှတ်မိကြမယ် ထင်ပါတယ်၊
သူငယ်ငယ်တုန်းက ရိုက်ထားခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုအပိုင်းအစတွေ တခါတခါ ပြန်ကြည့်ရင် “ကြည့်စမ်း..အဲဒီတုန်းက သား က ဒီလိုတွေတောင် လုပ်တတ်နေပြီ၊ သွားတတ်နေပြီ”လို့ တအံ့တသြနဲ့၊ ကလေးငယ်တွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါ ပေါင်းစုံကိုလည်း ရှာဖွေလေ့လာ မှတ်သားရတာအမော၊ သားကလေး နဲနဲနေမကောင်းတာနဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ ရှာပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိ တာကို ခန့်မှန်းရတာကလည်း အလုပ်တစ်ခု၊ သားက မခြူခြာပါဘူး၊ ကလေးတွေမှာ ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထရှိတဲ့ အဖျား အနာလေးတွေလောက်ပဲ ဖြစ်တယ်၊ အခုတော့လည်း သုံးနှစ်သားဆိုတော့ ပြေးလွှား ခုန်ပေါက်လို့ပေါ့၊
ကျနော်မှတ်မိသလောက် နှစ်နှစ်ခွဲလောက်မှာ သားအများဆုံး မေးလေ့ရှိတာက “ဒါဘာလဲ”ဆိုတာပဲ၊ ပြင်သစ်လို “C’est quoi” လို့မေးလိုက် မြန်မာလိုမေးလိုက်နဲ့ သူ သင်ကြားနေခဲ့တယ်၊ အခု သုံးနှစ်မပြည့်တပြည့်မှာ မေးလာ တာကတော့ “Pourquoi”ပဲ၊ “ဘာဖြစ်လို့လဲ” “ဘာ့ကြောင့်လဲ”တဲ့၊ ကလေးတွေဟာ ဒီ “ဘာ့ကြောင့်လဲ”ဆိုတာ မလွဲမသွေ မေးတတ်တယ်ဆိုတာ ကျနော်သိထားပြီး ဖြစ်လို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခဲ့တယ်၊ ပြင်ဆင်တယ်ဆိုတာ ကလည်း တခြားထွေထွေထူးထူး မဟုတ်ပါဘူး၊ သူ့ရဲ့ မေးခွန်းတိုင်းကို တတ်နိုင်သမျှ စိတ်ရှည်ရှည်ထားဖြေဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးထားတာပါ၊
သတိမပေးလို့ကလည်း မရဘူး၊ အဲဒီ “ဘာဖြစ်လို့” ဆိုတာကြီးက မိုးလင်းကနေ မိုးချုပ်အထိ တောက်လျှောက်ပါ ပဲ၊ အပြင်သွားခါနီး “သားရေ..ဒီဆွယ်တာလေး ဝတ်ကွာ”ဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့လဲ-တဲ့၊ အလုပ်နောက်ကျတဲ့ ရက်မျိုးဆိုရင် ကျနော်သတိလွတ်သွားပြီး “လူကြီးက ဝတ်ဆို ဝတ်ပါလား”လို့ ပြောမိမလိုဖြစ်သွားတယ်၊ ဒီကောင်ငါ့များ ကန့်လန့်တိုက်နေလားဆိုပြီး ကြည့်လိုက်တော့ သားကလေးရဲ့ အရိုးခံမျက်လုံးလေးတွေနဲ့ပဲ သွားဆုံပါတယ်၊ သူက တကယ့်ကို သိချင်စိတ် အပြည့်နဲ့ ကျနော့်ကို မော့ကြည့်လို့...၊ ရုတ်တရက် စိတ်ခုသွားတဲ့ အဖြစ်ကို သား မသိလိုက်ပေမယ့် ကျနော် စိတ် မကောင်းဖြစ်သွားတယ်၊ ပြီးတော့မှ “အရင်ရက်တွေက နဲနဲပူနေ တော့ ဝတ်စရာမလိုဘူးလေ၊ ဒီနေ့မနက်ကတော့ မိုးအုံ့နေလို့ သား ချမ်းမှာစိုးလို့ ဝတ်ခိုင်းတာကွ”လို့ ရှင်းပြလိုက် တယ်၊ ဒီတော့မှ ဆွယ်တာဝတ်ရခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းကို သိသွားလို့ သူ ချက်ချင်းပဲ ကောက် ဝတ်လိုက်တော့တယ်၊ အဲဒီလို အဖြစ်တွေက နေ့တဓူဝမို့ ကျနော်တတ်နိုင်သလောက် သတိထားနေရ ပါတယ်၊
တချို့မေးခွန်းတွေကတော့ ကျနော်တို့ကို အကျပ်ရိုက်စေပါတယ်၊ ဟိုတစ်နေ့က ကျနော်တို့ ဝရန်တာမှာ လာ, လာနားလေ့ရှိတဲ့ စာကလေးတွေကို ကြည့်ရင်း စာကလေးက ခြေထောက်ပါရဲ့သားနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ လမ်းမလျှောက် တာလဲ-တို့၊ လူကြားထဲမှာ လေ,တက်တာဟာ ဘာဖြစ်လို့ မယဉ်ကျေးဘူးလို့ ပြောကြတာလဲ-တို့၊ ငိုတဲ့အခါ ဘာဖြစ်လို့ မျက်ရည်ကျလာတာ လဲ-တို့ စ,တဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေပေါ့၊ တခါကလည်း အကောင်ပလောင်လေးတွေ ကို မသတ်ဖို့ပြောရင်းက “သေတယ်”ဆိုတာ ဘာလဲလို့ မေးပြန်ရော၊ တချို့အကြောင်းတွေကို သုံးနှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ယောက် နားလည်အောင် ရှင်းပြရတာ သိပ်တော့ မလွယ်ပါဘူး၊ သူ မသိတဲ့ ဝေါဟာရတစ်လုံးကို ဖြေဖို့ နောက်ထပ် ဝေါဟာရ အသစ် ဆယ်လုံးကိုလည်း ကျနော်မသုံးချင်ဘူး၊ အထူးသဖြင့်တော့ အလုပ် ပင်ပန်း နေတဲ့အချိန်မျိုး တွေမှာ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြဖို့ အတော်ကြိုးစားရတယ်၊ ကျနော်က သူ့ကို “လူကြီးက ပြော ရင် မှတ်လိုက်၊ ဘာမှပြန်ပြီး လျှာရှည်မနေနဲ့”လို့ မပြောမိအောင် အမြဲသတိထားပါတယ်၊
သားကိုကြည့်ရင်း ကျနော်လည်း ငယ်ငယ်တုန်းက သူ့လိုပဲ အဲဒီလိုတွေ တချိန်လုံး လျှောက်မေးနေတာပဲလား လို့ ပြန်စဉ်းစားမိတယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သုံးဆယ်ကျော်က အဖြစ်အပျက်တွေက ပြက်ပြက်ထင်ထင် မရှိလှပါဘူး၊ ကျနော်မှတ်မိသလောက်က မမေးဘူး ဆိုတာပဲ၊ မေးရင်တောင်မှ သူ့လောက်တော့ မဟုတ်လောက်ဘူး၊ ဒါနဲ့ ကျနော်နဲ့ရွယ်တူ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ အကြောင်း စဉ်းစားကြည့်ပြန်ရော၊ သူတို့လည်း ဘယ်သူမှ ဒီလိုတွေ ကပ်သီးကပ်သပ် လျှောက်မမေးကြဘူး၊ မြန်မာပြည်မှာ ရှိစဉ်တုန်းက တူ,တူမတွေ၊ အိမ်နီးချင်း ကလေးတွေ အကြောင်းတွေးမိတော့လည်း ဘယ်သူမှ ဒီလို တချိန်လုံး ဘာဖြစ်လို့လဲ၊ ဒါဘာလဲ လို့ မေးမနေကြပါဘူး၊ ဘာဖြစ် လို့ မမေးကြတာလဲ၊ ကျနော်ကလေးဘဝတုန်းက ဘာမှ မသိချင်ခဲ့ဘူးလား၊ ဒီကလေးငယ်တွေကကော ပတ်ဝန်းကျင်ကို စိတ်မဝင်စားကြဘူးလား၊ သုံးနှစ်အရွယ်စီ ရှိကြတဲ့ မြန်မာကလေး တစ်ယောက်ရယ်၊ အာဖရိကန် ကလေးတစ်ယောက်ရယ်၊ အနောက်တိုင်းက ကလေးတစ်ယောက်ရယ်.. အဖြစ်အပျက်တစ်ခု၊ စကားလုံးအသစ်တစ်ခုကို ချဉ်းကပ်ပုံက ကွာနိုင်သလား၊ ဘယ်လောက် ကွာနိုင်သလဲ၊ ပြောရရင်တော့ ပညာရှင်တွေ တလျှောက်လုံး ဆွေးနွေးငြင်းခုန်နေကြတဲ့ ကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာ ဗီဇပေါ် မူတည် လား၊ ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ် မူတည်လား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုပဲ ဦးတည်သွားမှာပါပဲ၊
ကျနော့်တဦးတည်း အမြင်အရတော့ ဗီဇကော ပတ်ဝန်းကျင်ပါ မူတည်ပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် တခုကိုပဲ မဖြစ်မနေ အလေးပေးရမယ် ဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်က ပိုပြီးအရေးပါလိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်၊ ဒီကမ္ဘာမြေရဲ့ ဘယ်နေရာမှာပဲ မွေးမွေး၊ ဘယ်လို အသားအရောင်ပဲရှိရှိ ကလေးတိုင်းကတော့ အရာရာကို စူးစမ်းချင်စိတ် အနည်းနဲ့အများ ရှိကြ မှာပါပဲ၊ အင်မတန် ရှုပ်ထွေးဆန်းကြယ်တဲ့ ဒီလောကကြီးကို သူတို့ရဲ့မေးခွန်းလေးတွေနဲ့ ချဉ်းကပ်ကြတဲ့အခါ ပြန်ရလာတဲ့ အဖြေက “ဟယ်..ဒီကလေးဟာ တော်တော့်ကို လျှာရှည်တယ်”တို့၊ “သေနာလေး..နင်ဟာလေ တော်တော့်ကို အထွန့်တက်ပါလား၊ လူကြီးစကား နားထောင်စမ်း”တို့၊ “တယ်..ငါတီးထည့်လိုက်ရ၊ နင်ကများ မိဘကို ပြန်ပြီး မေးလားစမ်းလားနဲ့”တို့ ဖြစ်နေခဲ့မယ် ဆိုပါစို့၊ ဒီကလေးငယ်တွေရဲ့ စူးစမ်းချင်စိတ်တွေဟာ အဲဒီ မှာတင်ပဲ အညွန့်ကျိုး၊ အရွက်ကြွေ ဖြစ်ကုန်မှာပါပဲ၊ ပိုဆိုးတာက ဒီလိုပြန်လှန် မေးမြန်းတာဟာ လူကြီးကို စော်ကားရာကျတယ်၊ ရိုင်းရာကျတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်တွေပါ ဝင်လာနိုင်ပါတယ်၊ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ ခေါ်ရင်လာ၊ ခိုင်းရင်လုပ်၊ ခံမပြောနဲ့ ဆိုတဲ့ဘောင်ထဲ တဘဝလုံးစာ ရိုက်သွင်းခံလိုက်ရတာပါပဲ၊ ကြီးလာတဲ့အခါ လူကြားသူ ကြားထဲ ပြောရဲဆိုရဲတဲ့စိတ်၊ အမှားနဲ့ အမှန်ကို ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အလေ့၊ အဖြစ်အပျက်တွေမှာ အကျိုးနဲ့အကြောင်း ကိုခွဲခြားမြင်နိုင်တဲ့အကျင့် စ,တာတွေ ပျောက်ဆုံးကုန်တဲ့အခါ ဒီကလေးအတွက်သာမက သူ့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပါ အများကြီး ထိခိုက်စေပါတယ်၊ ဒီလိုကလေးတွေ ကျနော်တို့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ များသထက်များလာတဲ့အခါ တိုင်းပြည် အတွက် နစ်နာမှုက ကြီးမားလှပါတယ်၊
ကျနော်ဒီမှာ ကျောင်းတက်တော့ စာသင်ခန်းထဲမှာ ကျနော့်ထက်အများကြီးငယ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေက ရဲရဲ တင်းတင်းနဲ့ ဆရာကို ပြန်လှန်မေးခွန်းထုတ်တာတွေ့တော့ မြန်မာပြည်မှာ ဘွဲ့ရသည်အထိ တလျှောက်လုံး တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ ပညာသင်ခဲ့တဲ့ ကျနော့်အဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ မေးခွန်းတွေ ပြန်ထုတ်နေမိပါတယ်၊ အကြောင်းအရာ အဖြစ်အပျက်တွေအပေါ် ဒါဘာလဲ၊ ဘာကြောင့်လဲ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ စ,တဲ့ ရိုးရှင်းအခြေခံ ကျလှတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေနဲ့ ကလေးတို့ရဲ့ လောကကြီးကို သင်ယူမှုဟာ လူကြီးမိဘကို ရိုသေကိုင်းရှိုင်းမှု မရှိ တာ၊ လေးစားသမှု မရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ သူတို့လေးတွေရဲ့ ဖြူစင်တဲ့စိတ်အခြေခံနဲ့ အရိုးခံချဉ်းကပ်မှု သက်သက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီအကြောင်းတွေရေးလို့ ကျနော်က ကလေး စိတ်ပညာကျွမ်းကျင်သူ မဟုတ်သလို လူမှုသိပ္ပံကိုလည်း မသင်ဖူးပါဘူး၊ အင်မတန် စူးစမ်းမေးမြန်းလွန်းတဲ့ သားလေးကိုကြည့်ရင်း ကျနော်ခံစားမိ၊ တွေးမိတဲ့ အမြင်သက်သက်ပါပဲ၊ သူ သုံးနှစ်ပြည့် မွေးနေ့တုန်းကပုံတွေကိုတော့ နောက်ပို့စ်မှပဲ သီးသန့်တင် တော့မယ်ဗျာ။ ။
၁၈ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၁၀
Posted by ညီလင်းသစ် au 18.9.10
အမကိုယ်တိုင် ကျောင်းသားတွေ မေးခွန်းထုတ်တတ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ ဆရာမဖြစ်ခဲ့ဖူးပေမဲ့ ခု အမဒီမှာကျောင်းတက်တော့ ဆရာမကို မေးခွန်းထုတ်ဖို့ကို ၀န်လေးနေမိတယ်။ မလိုအပ်ဘဲလည်း ဆ၇ာမကို ကြောက်နေသလိုပဲ..။ တကယ်ပဲ အလေ့အကျင့်နဲ့ ထုံးစံကိစ္စတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုပေါ့ ညီလင်းရေ..။ ခုတော့ အမလည်း သားသမီးတွေနဲ့ မေးခွန်းတွေကို ရင်ဆိုင်နေရပြီ။ အထူးသဖြင့်တော့ Why.. ဆိုတဲ့ အသံတွေပေါ့.. အင်း မိဘအနေနဲ့လည်း ကြိုးစားဦးမှပါ.. ဟူးးးးးးးး
September 18, 2010 at 10:44 PM
Soe Mya Nandar Thet Lwin (Borros Roxo) said...
ဒီနှစ် Summer မကုန်ခင် ဂျီနီဗာ ရောက်တုန်းက ကိုညီလင်းသစ်တို့ မိသားစုကို သတိတရ တွေးမိသေးတယ်။
ဒီပိုစ့်မှာ ဖခင်တယောက်ရဲ့ နွေးထွေးတဲ့ မေတ္တာကို ခံစားမိတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာ ဗီဇကော ပတ်ဝန်းကျင်ပါ မူတည်တယ် ဆိုတာာကို သဘောတူမိတယ်။ အရာရာကို စူးစမ်းချင်စိတ်ရှိပြီး ဒီလို စူးစမ်းနိုင်ခွင့် ရအောင် လူဖြစ်လာရတဲ့ ကလေးတွေ ကံကောင်းကြတယ်လို့ ဆိုရမယ်နော်။
သားလေး မွေးနေ့အတွက် သူ့အနာဂါတ်မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး သွားပါတယ်။
September 19, 2010 at 1:59 AM
September 19, 2010 at 3:19 AM
ဘလော့ပေါ်မှာ မိခင်ဘလော့ဂါတွေသာများပြီး မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်တွေကိုသာဖတ်ရတာများတယ် ဒီမှာောတ့ အစ်ကို့ရဲ့ သားလေးအကြောင်းဖတ်ရတော့ ဖခင်တစ်ယောက်နေရာကနေ ၀င်ပြီး ခံစားကြည့်သွားတာ ကြည်နုးမှုအပြည်နဲ့ပါ။ ကိုယ်ပျိုထောင်လိုက်ရတဲ့ ပန်းကလေးတစ်ပွင့်ကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ရေလောင်းပေါင်းသင် သိပ်ကို ဥယာဉ်မှူးကောင်းသီပတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုပေါ့ဗျာ လေးစားတယ် အစ်ကိုရေ ပြီးတော့ အားလည်းကျတယ် ။ နိုင်ငံရပ်ခြားက ကောင်းတဲ့ စနစ်တွေနဲ့ ကြီးပြင်လာရမယ့် သားလေးဟာလည်း ထက်မြက်တဲ့ လူရည်ချွန်လေးဖြစ်လာမှာပါလို့ ယုံကြည်ပါတယ် မြန်မာစိတ်လေး လည်း အမြဲကျန်နေပါစေလို့ သားအတွက်ဆုတောင်းရင် Happy Birthday သားရေ မွေးနေ့မှစ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ချစ်သော ဖေ ၊မေ နဲ့ အတူ အမြဲ အတူတကွ ရှေိနေနိုင်ပါစေဗျာ ။
September 19, 2010 at 5:20 AM
ကျနော်လဲ ကျောင်းမှာ အတော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်။ ဆရာမက ကျနော်မမေးတဲ့ အဆုံး မေးခွန်းလုံးဝမရှိတဲ့ သူတွေက အားလုံးနားလည်လို့လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်..ဘာမှနားမလည်လို့လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ ကျနော်က အတန်းထဲ ထထ မေးရမှာ အစပိုင်းမရဲခဲ့ဘူး။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ မေးရဲသွားပြီ။ သူတို့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ပြန်ဖြေပေးတယ်။
September 19, 2010 at 11:15 AM
Nyi Linn Thit said...
ဓလေ့ထုံးစံတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုက များလွန်းလှတယ်၊ အိမ် မှာလည်း လောလောဆယ်တော့ အဲဒီ WHY တွေပဲ ဆူညံနေတာပါပဲ၊ :) မိဘနဲ့ သားသမီး ကြားက မျှတတဲ့ ဆုံမှတ်ကလေးကို ရောက်ဖို့ မိဘက ပိုပြီး ကြိုးစားရမှာပါပဲ အမရေ့...။ C'est la vie ပါပဲ...နော့။
ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးပါပဲဗျာ၊ နောက်တခါ ဂျီနီဗာ ရောက်တဲ့အခါ အချိန်ရရင် Lausanne ဖက်ကိုပါ လာလည်လေ၊ ဂျီနီဗာထက် ပိုလှတယ်။ :)
ကျနော်တို့လည်း အများနည်းတူ နေထိုင်ဖို့ သင်ကြား၊ သင်ကြားဖို့ နေထိုင် ပါပဲ၊ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းလှတဲ့ ဆုတောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါပဲဗျာ။
ဟုတ်တယ် ကိုဖြိုးအောင်ရ ...
တခါတခါ အများနည်းတူ ဝင်ဆွေးနွေးချင်ပေမယ့် ဘာမေးလို့ မေးရမှန်းတောင် မသိတဲ့အဖြစ်က အတော်ဆိုးတယ်လို့ ပြောရမှာပဲ :) Stupid question ဆိုတာမရှိဘူး၊ မရှင်းတာမှန်သမျှ မေးသာမေးလို့ ဖွင့်ပေးတဲ့ ဆရာမျိုးနဲ့တွေ့ရင် သိပ်မရဲတဲ့ ကျောင်းသား တွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။
September 19, 2010 at 5:33 PM
Yu Wa Yi said...
“ကျနော့်တဦးတည်း အမြင်အရတော့ ဗီဇကော ပတ်ဝန်းကျင်ပါ မူတည်ပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် တခုကိုပဲ မဖြစ်မနေ အလေးပေးရမယ် ဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်က ပိုပြီးအရေးပါလိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်၊ ဒီကမ္ဘာမြေရဲ့ ဘယ်နေရာမှာပဲ မွေးမွေး၊ ဘယ်လို အသားအရောင်ပဲရှိရှိ ကလေးတိုင်းကတော့ အရာရာကို စူးစမ်းချင်စိတ် အနည်းနဲ့အများ ရှိကြ မှာပါပဲ၊ အင်မတန် ရှုပ်ထွေးဆန်းကြယ်တဲ့ ဒီလောကကြီးကို သူတို့ရဲ့မေးခွန်းလေးတွေနဲ့ ချဉ်းကပ်ကြတဲ့အခါ ပြန်ရလာတဲ့ အဖြေက “ဟယ်..ဒီကလေးဟာ တော်တော့်ကို လျှာရှည်တယ်”တို့၊ “သေနာလေး..နင်ဟာလေ တော်တော့်ကို အထွန့်တက်ပါလား၊ လူကြီးစကား နားထောင်စမ်း”တို့၊ “တယ်..ငါတီးထည့်လိုက်ရ၊ နင်ကများ မိဘကို ပြန်ပြီး မေးလားစမ်းလားနဲ့”တို့ ဖြစ်နေခဲ့မယ် ဆိုပါစို့၊ ဒီကလေးငယ်တွေရဲ့ စူးစမ်းချင်စိတ်တွေဟာ အဲဒီ မှာတင်ပဲ အညွန့်ကျိုး၊ အရွက်ကြွေ ဖြစ်ကုန်မှာပါပဲ၊ ပိုဆိုးတာက ဒီလိုပြန်လှန် မေးမြန်းတာဟာ လူကြီးကို စော်ကားရာကျတယ်၊ ရိုင်းရာကျတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်တွေပါ ဝင်လာနိုင်ပါတယ်၊ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ ခေါ်ရင်လာ၊ ခိုင်းရင်လုပ်၊ ခံမပြောနဲ့ ဆိုတဲ့ဘောင်ထဲ တဘဝလုံးစာ ရိုက်သွင်းခံလိုက်ရတာပါပဲ၊ ကြီးလာတဲ့အခါ လူကြားသူ ကြားထဲ ပြောရဲဆိုရဲတဲ့စိတ်၊ အမှားနဲ့ အမှန်ကို ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အလေ့၊ အဖြစ်အပျက်တွေမှာ အကျိုးနဲ့အကြောင်း ကိုခွဲခြားမြင်နိုင်တဲ့အကျင့် စ,တာတွေ ပျောက်ဆုံးကုန်တဲ့အခါ ဒီကလေးအတွက်သာမက သူ့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပါ အများကြီး ထိခိုက်စေပါတယ်၊ ဒီလိုကလေးတွေ ကျနော်တို့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ များသထက်များလာတဲ့အခါ တိုင်းပြည် အတွက် နစ်နာမှုက ကြီးမားလှပါတယ်၊” ဒီစာတစ်ပိုဒ်လုံးကို အပြည့်အ၀ထောက်ခံပါ၏။ အဲလိုအမြင်မျိုးရှိတဲ့ လူကြီးသူမတွေသာ များများစားစားရှိကြစေဖို့ သာ...သားသားရဲ့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းနှင့်အတူပေါ့။ Happy Birthday! ဖိုးသားရေ။
September 20, 2010 at 5:55 AM
ကျမလည်း သူများတွေမေးခွန်းမေးနေတာတွေကို အားကြစွာ ငေးကြည့်မိသလို ၊ အားငယ်မိခဲ့ဘူးပါတယ်။
September 20, 2010 at 8:10 PM
အခုအချိန်မှာတော့ ကျမတို့ သားအမိ၂ ယောက်က အပြန်အလှန်ကို သင်ကြားနေဖြစ်တယ် ... သူမသိတာကိုယ့်မေး ..ကိုယ်မသိတာသူ့မေး ... ဒီကခလေးတွေတွေ့၇သလောက်ကတော့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ယုံကြည်မှုအပြည့် ရှိနေတာ ကျမတို့ ငယ်ဘ၀တွေ နဲ့တော့တခြားစီဘဲ ညီလင်း ရေ ...ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိနေတာ လည်း ကံကောင်းခြင်းတခုဘဲ .. မိဘတွေကတော့ လမ်းပြပေးယုံဘဲပေါ့ ...
သားသားလေး ပုံတွေ ကြည့်ပါရစေဦး ... ကျန်းမာချမ်းသာ ပြီး ထူးချွန်ထက်မြက် တဲ့ သားလေးတယောက် ဖြစ်ပါစေ ...
September 22, 2010 at 3:07 AM
Raymond.Kyaw Minn Naing said...
Bonjour! Nice post Bro !
September 30, 2010 at 4:37 AM
Today i came n read the debt in ur blog.U r not onlyagood writer butagood father.I can see ur affection on ur little prince through ur blog.All the best to u n ur little boy.
October 1, 2010 at 3:15 PM
ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး သိပ္ပံမောင်ဝရေးတဲ့ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေး သတိရမိတယ်။
မောင်လူမွှေးက သူ့အဖေ မောင်လူအေးကို စာကလေးက ဘာလို့ ဖိနပ်မစီးတာလဲ စသဖြင့် နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်တွေ မေးလွန်းလို့ အဖြေရခက်ပြီး စိတ်အိုက်နေတုန်း အိုက်စ်ခရင်သည်ကြီးလာလို့ ကလေးစိတ်ပြောင်းသွားတာနဲ့ လူကြီးလဲ စိတ်သက်သာရာ ရသွားတာလေ ... ကိုညီလင်းသစ် ဖတ်ဖူးမလားတော့မသိဘူး။
အဲဒီလို မေးခွန်းတွေ မေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျမလဲ ဘလော့မှာ ဆောင်းပါးတပုဒ် ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ (ကိုယ်တိုင် ကြော်ငြာရပြန်ပြီ။) ကိုညီလင်းသစ်နဲ့ ကျမတို့ အတွေးချင်း ထပ်တူမကျသည့်တိုင်အောင် အတော်လေး နီးစပ်မှုရှိပါတယ်။
http://maydar-wii.blogspot.com/2007/03/blog-post_25.html အဲဒါကို ဖတ်ကြည့်ရင် ကိုညီလင်းသစ် ပို့စ်အတွက် ကျမပြောချင်တဲ့ ကျမရဲ့ ကွန်မန့်ပဲ ဆိုပါတော့ ... တချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် ... :)
March 6, 2011 at 10:37 PM
တကယ်တော့… ရံဖန်ရံခါ ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းလေးတွေ, တခုတ်တရ ဝေမျှ ခံစားချင်တဲ့ စကားလုံး အစုစုတွေ, ရှားတောင့် ရှားပါး ယိုစီးကျလာ တတ်တဲ့ ကဗျာလေးတွေ, လက်နဲ့ဖမ်းဆုပ် ရက်ထုတ် ချင်မိတဲ့ အတွေး မျှင်တန်းတွေ, ဒါတွေ အားလုံးကို အမိုးအကာ တခုတည်းအောက် မှာ တစုတစည်းထဲထားဖို့အတွက် ဒီရိပ်မြုံ လေးကို ကျနော် တည်ဆောက် ဖြစ်ပါတယ်၊ လာရောက် လည်ပတ်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူး အများကြီး တင် ပါတယ်။
Rose of Freedom
စာတတန်၊ ပေတဖွဲ့ ဆိုရင်တော့...
ဒါတွေ အဖတ်များကြတယ် ဆိုပဲ..
ကျနော်နှင့် ကွန်ပြူတာ (ဆိုသောအရာ..)
ဟိုရက်တွေတုန်းက ကျနော့်ကွန်ပြူတာ ပျက်သွားတယ်၊ ပျက်သွားတယ်ဆိုတာက ရုတ်တရက်ကြီး ဖွင့်မရတော့တာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကွန်ပြူတာ စဖွင့်ဖွင့်ချင်း ...
ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲတွေ စပြီဆိုရင်ပဲ လူကျွံဘောနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အငြင်းပွားစရာတွေက တပါတည်း တွေ့လာရတော့တာ ပါပဲ၊ လူကျွံဘောဆိုတာက ထိထိမိမိသာ အသုံးခ...
တနေ့က သတင်းတပုဒ်မှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံကို ရေထွက်ပစ္စည်းပို့ကုန်တွေ တင်ပို့တဲ့ မြန်မာကုမ္ပဏီတခုကို မွေးမြူရေးနဲ့ ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနက ဒဏ်ငွေဆယ်သိ...
သားကလေး ဒီနှစ်ပထမတန်း စ,တက်လို့ သုံးရက်မြောက်နေ့ အိမ်ကိုပြန်လာတော့ သူ့ရဲ့အာဂျင်ဒါထဲမှာ အတန်းပိုင်ဆရာမရဲ့ မှတ်ချက်လေးတခု ပါလာခဲ့တယ်၊ ဒီ အာဂျ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ…၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ပို့စ်မှာ ကျနော်ရေးခဲ့သလိုပဲ ခြင်္သေ့ကျွန်းကလေးဆီကို ဒုတိယအကြိမ် သွားဖို့အကြောင်းက မရည်ရွယ်ပါဘဲနဲ့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်၊...
အင်္ဂလန်သွား တောလား - ၆ - ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာ ၅ သောကြာနေ့ဝင်ဆာရဲတိုက်၊ စတုန်းဟန့် ခ်ျ၊ ဘတ်၊ လကွတ်တို့ ကို တိုးကားနဲ့သွားလည်မှာ။ Viator မှာထက် Klock App နဲ့ ဆိုရင် ဈေးနည်းနည်...
My Favorite Photos..... - မမ၀သုန်ချုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဝတ်စုံနဲ့လှနေသောသူ (ဘယ်သူမလှဘူးပြောပြော ကွကိုယ်လှတယ်ကွာ) 2014 ဟာ ကျွန်မဘ၀အတွက် အပြောင်းအလဲအဖြစ်ဆုံးနဲ့ ခံစားမှုရသတွေထုံမွှမ်းစေခဲ့တ...
"ကျွန်မရဲ့လမ်း ဘဝရဲ့လမ်းများ" - ကလေးငယ်ငယ် လမ်းလျှောက်တတ်ကာစအရွယ် ယိုင်ထိုးယိုင်ထိုးကတည်းက လမ်းတွေ စမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ အဖေအမေတွေက ရပ်နိူင်ပေ့ ရပ်နိူင်ပေ့လို့ အားပေးရင်း လဲသွားမှာစိုးစိတ်နဲ...
မနေ့ကအမှတ်တရ…..24/2/2019 - မနေ့က အပျော်က ဒီနေ့ထိကပ်ပါလာလို့ဒီစာကိုအမှတ်တရရေးချင်တာကြောင့်ရေးပါတယ် ။ အစ်မမြသွေးကလည်း အမှတ်တရစကားတက်ပြောရင်း ဘလော့ဂါတွေအနေနဲ့ ဒီအမှတ်တရလေးကိုစာရေးကြပ...
အားကျရတာမောနေပြီ - ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က အင်္ဂါနေ့မနက်ကထင်ပါရဲ့.. သမီးကို ကျောင်းသွားပို့တော့ အိမ်က စထွက်ကတည်းက တစ်မြို့လုံး တိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်လို့… ကားလမ်းကလည်း ရှင်းနေလိုက်တာများ...
သူ့အကြောင်း၊ ကိုယ့်အကြောင်း အချစ်တို့အကြောင်း ( ၅ ) - ကိုယ့်မှာ ရုံးမှာပဲ သတိနဲ့ နေရတယ်မဟုတ်ဘူး အိမ်မှာလဲ သတိလေးနဲ့ နေရရှာတာ ။ ဘယ်အချိန်များ မယ်ဟေမာ ဘယ်ဂလို မေးလိုက်ပါ့မလဲ လို့ ......... အိမ်မှာ သူ့ကျောင်းကပါလာ...
ဟိုတုန်းက ဒီဇင်ဘာ - ဘယ်တုန်းကမှ မရောက်စေချင်ခဲ့၊ အစဉ်အမြဲမေ့လျော့ထားချင်ခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာဟာ အချိန်တန်တော့ သူ့အလုပ် သူလုပ်ရင်း မပျက်မကွက် ရောက်လာခဲ့တာပဲ။ ဆောင်းဥတုရယ်လို့ ပီပ...
တချိန်က ခရစ္စမတ် - ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ရက် ည၉နာရီခန့်မှာ ကျွန်မတို့မောင်နှမတတွေ ကုတင်ကျယ်ကြီးအပေါ်မှာ ၀ိုင်းထိုင်နေကြပြီး စကားတွေဖောင်ဖွဲ့လို့ တစ်ယောက်တလှည့် အနားမပေးတန်းပြောနေချိန်မှ...
အချည်… - ပန်းတွေဟာ ရာသီမမှားပါဘူး။ အခါလွန်ပေမဲ့လည်း ပီပီသသ ပန်းဟာ လန်းဆန်းသင်းပျံ့ လေသင့်ရာ လွင့်တဲ့ ဝတ်မှုံဟာ လိပ်ပြာငေးသူ ဒီမှာ တိတ်တိတ်လေး… မွှေးမြနေပါတယ် တဲ့ စိတ်...
Happy Birthday Google! - *** သူနဲ့ မေးလ်​​တွေ talk​တွေ သုံးခဲ့ရလို့ ကမ္ဘာကြီးက ကျဉ်းသွား ... သူနဲ့ ရှာရ​ဖွေရ ​ဖတ်​ရှု ​လေ့လာခဲ့ရလို့ အမြင်​​တွေ ကျယ်​လာ ... *** အီး​မေးလ်​စစ်​ဖို့ ...
ပီတိ - ဂျူဂျူးသည် သွက်လက်ချက်ချာသော သုံးနှစ်ခွဲအရွယ် သမီးကလေး ဖြစ်သည်။ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း တီတီဇွန်က ဂျူဂျူးလေးနှင့်အတူတူ ဘုရားရှိခိုးရင်း ဘုရားစာသင်ပေးခဲ့သည်မှ...
စိတ်ရှုပ်တဲ့အခါ - စိတ်ရှုပ်တဲ့အခါ စိတ်ဟာ အရောင်မျိုးစုံရှိတယ်။ စိတ်ကိုလိုက်ဖမ်းရတာ မလွယ်။ မပျော်ရွှင်တဲ့ စိတ်အခြေအနေ တစ်ရပ်ထဲမှာ စိတ်ညစ်တာလည်းပါမယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ စိတ်ဆိုးတာ၊ ...
- အေးစက်စက်လေကိုရှူသွင်းနေရတဲ့ဒီမြေမှာ အနေကြာခဲ့သည့်တိုင် အသားမကျသေးတာက ကိုယ့်ရဲ့ဇီဇာကြောင်လွန်းမှူလေလားမသိ အေးစက်စက်အကြည့်တွေ အေးစက်စက်လေတွေ ကြားထဲ နွေးထွေးတဲ...
Energi matahari sebagai sumber energi alternatif - [image: Sumber energi alternatif] Apa itu Energi Alternatif ? Degolar Online – Ada banyak energi yang dapat kita gunakan jika kita hanya berusaha untuk mene...
Happy 2018 - ချစ်သောအနီးအဝေးမှ မိတ်ဆွေများ မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ။ အိုင်အိုရာ
ကာရေဘီယံညများ - တဖိတ်ဖိတ်တောက် နဂါးငွေ့တန်းအောက် အချစ်ပျောက်ရှာတော့ လှိုင်းရေတွေအောက်... ကြယ်တွေလား အလင်းမှုန်တွေလား အတွေးစတွေလား မသဲကွဲ... လေပြည်တွေလား ရေလှိုင်းတွေလား န...
Adora & etc.
တိုက်နံပတ် ၁၉၃က မိန်းမ - မတ်လလည်လောက်ကစပြီး သူမ အိမ်အသစ်ပြောင်းနေရတယ်။ အိမ်ဝယ်ဖို့အခွင့်မသာသေးသရွေ့အိမ်ပြောင်းရ၊ ရွှေ့ရ လုပ်ရတာတွေက သိပ်တော့မထူးဆန်း။ ဒီတခေါက် ပြောင်းတဲ့ နေရာက သူမ အ...
ဘောင်ခတ်ပါ၊ မသတ်နဲ့ ... - အခုပုံနဲ့တကွ တင်ထားတဲ့ ပို့စ်တခုကို ပညာရေး ဂရုမှာ ဖတ်မိလိုက်တယ်။ ပို့စ်က ခပ်တိုတိုပါ။ မေးခွန်းထုတ်ထားတဲ့ ပို့စ်ပေါ့။ “ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက နံပါတ်(၁) ...
Back to Blog - ဘလော့ကို သတိယလျက်ပါ ရေးချင်နေတဲ့ စာတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲ ကောက်တင်လို့ ရတဲ့ မျက်နှာစာအုပ်မှာ စာတိုလေးတွေ ရေးနေပေမယ့် အားပေးသူ က အမျိုးမျိုးဆိုတော့ စိတ်ကျေ...
နတ်ရေးတဲ့ရွှေစာ - Number of View: 4840၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလထုတ်၊ မြင်ကွင်းမဂ္ဂဇင်း မှာ ပါဝင်ခဲ့သည်။ (ပန်းချီ- မမွှေး) မကြာခင် မင်္ဂလာဆောင်တော့မည့် သတို့သမီးများထဲမှာ စိတ်အတည်ငြ...
ရေမရသော တောင်စဉ်များ... - နာရီသံတချက်ချက်ကြားမှာဘဝတွေဟာ မိန်းမောနေကြတယ်။ ယောင်ယမ်းပြီးတော့များ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိမရလိုက်နဲ့။ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ အကြောင်းပြောကြမယ်။ အနာဂတ်တွေအကြောင်း ခ...
ငိုညညျးတဲ့ အသညျးမြား.... - ဗလီသှားတယျ... အလှူငှပေုံးပိုကျပွီး ကောကျခံပေးတယျ...(ရဘေေးဒုကျခသညျမြားအတှကျ..) စာအုပျဆိုငျရောကျခဲ့တယျ... စာအုပျမှကေောငျးတုနျး.... စိုးရိမျ နှေးထှေးတဲ့ ဖုနျးဝ...
ကလေးလေးရဲ့ စာစီစာကုံး - ဒီနေ့ကလေး နိုးထလာမိတဲ့အချိန် ... ပထမဦးဆုံး ကြားလိုက်တာ ငိုသံတစ်ခု … သေချာနားထောင်ကြည့် လိုက်တော့ ကလေးရဲ့မေမေငိုသံပါ … ကလေးမှာ အမည်နာမ မရှိသေးပါဘူး …ေ...
ငတ်မွတ်နေသောအရာ - ကိုယ်တောင့်တနေတာ မင်းရင်ထဲက စကားတစ်ခွန်းမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်တောင့်တနေတာ မင်းရင်ထဲက အပြုအမူတစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်တောင့်တနေတာ မင်းရင်ထဲက ဘာဆိုဘာမှမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်တေ...
ပူစီ၊ ဘရာနီ၊ မုသာဝါဒနှင့် ကျွန်တော်.... - *အ*ထက်ပါခေါင်းစဉ်လေးအား ဖတ်ရှုပြီးနောက် ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေများ အနည်းငယ် စဉ်းစားသွားကြမည် ထင်ပါသည်။ ကိုဏီတစ်ယောက် ဘာတွေထွင်ပြန်ပြီလဲ ဟူ၍။ ရှင်းပြပါမည...
ဖြတ်စ လေးတွေ.... - ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က အလုပ်ထဲမှာ စကားတွေပြောကြရင်းနဲ့ တယောက်က သူ့သား အကြီးလေး တက္ကသိုလ်တက်ရတော့မှာမို့ လွမ်းနေတော့မယ့်အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ သူ့သားလေးရဲ့ မလျှော်ရသေ...
တနေ့တာ အတွေး ( ၁၈၊၈၊ ၂၀၁၄ ) - ညကအိပ်မက်မက်တယ်။ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ ဒီအတိုင်းပဲတွေ့ထိသိ နေနိုင်တယ်ဆိုတော့ သာမာန်အိပ်မက်တခုပဲဆိုပါတော့။ သို့ပေမဲ့...
ရန်ကုန်ကိုပြန်ခဲ့တယ် - ၁၀လရှိပါပြီ။ ရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်တာ။ ရောက်ကာစ၆လလောက်ကို နေ့တိုင်းနီးပါးမိုးလင်းမိုးချုပ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်ကို ဂျပန်ကပြန်ရောက်တဲ့ အချိန်ကပေါ့၊ ညဘက်၈န...